The Rohingya News Bank : ဒုက္ခသည်များနေရန်ပြန်ခြင်း မြန်မာစတင်ရေး တရုတ်က တက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တောင်းဆို။
နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခြင်း ၄၅-နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခန်းအနားတွင် ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အေကေ အဗ္ဗဒူမိုမန်က တရုတ်နိုင်ငံအား ယခုကဲ့သို့ တောင်းဆို လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနအဆိုအရ သိရှိရသည်။
နှစ်ပတ်လည် အခန်းအနား အထိန်းအမှတ်အဖြစ် သမ္မတ မိုဟာမက်အဗ္ဗဒူဟာမစ်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာ စီနာ တို့ကလည်း တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် လီခယ်ကျင်းတို့ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း နှုတ်ခွန်း ဆက် သဝဏ်လွှာများ ပေးပို့ကြသည်ဆို၏။
သမ္မတ ဟာမစ်ကမူ ဖော်ရွေသော တရုတ်ပြည်သူများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် သာယာဝပြောမှု များ ဆက်လက်တိုးပွားပါစေလိုကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပြီး၊ အနာဂါတ်ကာလတွင် နှစ်နိုင်ငံ အကြားရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပိုမိုခိုင်မာလာမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်က ပြန်လည်ရေးသားရာ၌ နှစ်နိုင်ငံတို့သည် တန်းတူညီမျှမှုအခြေခံဖြင့် အပြန်အ လှန် လေးစားစွာ အစဉ်အမြဲ ဆက်ဆံခဲ့ကြကြောင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ယုံကြည်မှု ခိုင်မာစေရန်နှင့် အကျိုးရှိ သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် နက်ရှိုင်းစွာ ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ် နိုင် ငံအနေခြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်းမှုကို အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိ ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာစီနာကလည်း တရုတ်နိုင်ငံအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရေးပါဆုံး မိတ်ဖက်အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အဆင့်သို့ မြှင့် တင် ရေး နည်းလမ်းရှာဖွေနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံ ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွား မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကပ်ကျရောက်လျှက်ရှိစဉ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကူအညီပေးမှုနှင့် ပုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အလေးအနက် တန်ဖိုးထားပါကြောင်း သဝဏ်လွှာ ရေးသားပေးပို့သည် သ တင်း၌ ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
((( Dhaka Tribune., October 4th, 202,” Bangladesh asks China for proactive roles to persuade Myanmar to begin Rohingya repatriation. By: Humayun Kabir Bhuiyan. “ ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲ – သရဝဏ်(ပြည်)
CNN team confronts Myanmar’s military on deadly coup
OPINION - Political calculations to settle Myanmar crisis
Archive လအလိုက်သတင်းများ April 2021 (120) March 2021 (320) February 2021 (232) January 2021 (172) December 2020 (174) November 2020 (153) October 2020 (193) September 2020 (108) August 2020 (92) July 2020 (139) June 2020 (157) May 2020 (192) April 2020 (90) March 2020 (101) February 2020 (212) January 2020 (310) December 2019 (305) November 2019 (339) October 2019 (184) September 2019 (162) August 2019 (185) July 2019 (344) June 2019 (386) May 2019 (422) April 2019 (523) March 2019 (623) February 2019 (517) January 2019 (439) December 2018 (11) November 2018 (37) October 2018 (174) September 2018 (46) August 2018 (57) July 2018 (9) June 2018 (13) May 2018 (16) April 2018 (13) March 2018 (11) February 2018 (7) January 2018 (6) December 2017 (10) November 2017 (10) October 2017 (59) September 2017 (62) August 2017 (2) July 2017 (5) March 2017 (6) January 2017 (4) December 2016 (33) November 2016 (76) October 2016 (15) September 2016 (3) August 2016 (6) June 2016 (2) May 2016 (1) April 2016 (2) January 2016 (1) December 2015 (2) October 2015 (1) September 2015 (3) August 2015 (44) July 2015 (1) June 2015 (5) April 2015 (2) February 2015 (6) January 2015 (1) December 2014 (1) November 2014 (2) October 2014 (1) September 2014 (2) July 2014 (1) June 2014 (2) May 2014 (1) April 2014 (1) March 2014 (1) January 2014 (3) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (2) August 2013 (5) July 2013 (4) June 2013 (17) May 2013 (26) April 2013 (15) March 2013 (3) February 2013 (2) January 2013 (37) December 2012 (488) November 2012 (13) October 2012 (11) September 2012 (2) August 2012 (14) July 2012 (1) June 2012 (2) May 2012 (1) January 2012 (5) November 2011 (1) October 2011 (1) August 2011 (1) January 2011 (1) February 2010 (1) January 2010 (1) October 2009 (1) February 2009 (1) January 2009 (1) January 2008 (1) January 2007 (1) January 2006 (1) January 2005 (1) January 2004 (1) July 2003 (2) February 2001 (1) July 1998 (1) September 1996 (1) March 1996 (1) December 1994 (1) December 1993 (1) October 1993 (1) December 1992 (1) May 1992 (1) December 1991 (1) May 1978 (1)